Maraykanka: Tobanaan Ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday Tareen kabaxay khadka uu ku socday. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Dec 19, 2017 309 0
Markii ugu horeysay tan iyo markii uu soo baxay cadadkii 17-aad ee Inspire, ayna kaga hadashey sida tareennada looga leexiyo khadadka ay isticmaalaan taas oo keeni karta khasaare badan, waxaa Maraykanka ka dhacay ceynkaas ah.
Tareen ay saarnaayeen kudhowaad 100 ruux ayaa si kedis ah looga leexiyay khadkii uu isticmaalayay, isagoona jiiray dad badan oo maraykan ah, kuwaas oo ku sugnaa goobta.
Warbaahinta Maraykanka noocyadooda kala duwan oo dhacdadan aad u hadal haya ayaa saraakiisha Amaanka ee ay soo xiganayaan waxay ka gaabsanayaan illaa iyo hadda iney ka hadlaan waxa keenay in tareenka uu khadka ka baxo.
Saraakiil hadlay waxay xaqiijiyeen in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay jiraan, wallow ay ka gaabsadeen iney cayimaan tirada dhabta ah.
War kasoo baxay shirkadda iska leh Tareenka khadka kabaxay ayaa lagu sheegay in Tareenku saarnaayeen 78 ruux, iyo shan katirsan shaqaalaha, waxaana Tareenku marayay wado isku xirta magaalooyinka Setal iyo Portland.
Lama oga illaa iyo hadda waxay sababay in tareenkan uu khadka kabaxo, waxaana kahor inta aanu dhicin saraakiisha Booliiska ay ka digeen iney dhici karaan weeraro ay ku tilmaameen Argagaxiso oo ka dhan ah khadadka ay isticmaalaan Tareennada.
Cadadkii ugu dambeeyey ee ay soo saartay majallada Jihaadiga ee Inspire, ayna soo saaraan mujaahidiinta Alqaacida ee Jaziiradda Carabta ayay kaga sheekeysay sida tareennada looga leexiyo khadadka ay ku socodaan, taas oo ah howl fudud, khasaare adagna gaarsiin karta Maraykanka iyo muwaadiniintiisa.